Kolanyo Itoobiyaan Ah Oo Kamiino Loo Dhigay. – Calamada.com
Kolanyo Itoobiyaan Ah Oo Kamiino Loo Dhigay.
Wararka laga helayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobalka Hiiraan waxey sheegayaan in weeraro dhabba gal ah loo dhigay kolanyo ka tirsan Kufaarta Xabashida Itoobiya oo ku socdaalayay wadada isku xirta magaalada Beledweyne iyo deegaanka Halgan oo gobalka Hiiraan ka wada tirsan.
Weerarada dhabba galka ah oo gaaraya ilaa labo kamiin waxey si gaar ah kaga dhaceen inta u dhaxeysa deegaanada Bur-daar iyo Nuur Fanax oo ka wada tirsan deegaanada dhaca wadada Laamiga ee isku xirta Beledweyne iyo Halgan.
Dadka deegaanada ayaa xaqiijiyay in kamiinadan oo midkood saacad ku dhaw uu socday ay jiraan khasaara Xabashida Itoobiya lagu gaarsiiyay walow tiro cayiman aan laga heyn inta uu la egyahay khasaarahaasi.
Habeenkii xalay ayeey aheed markii dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa Kufaarta Xabashida Itoobiya uu ka dhacay deegaanka Bur-daar ee gobalka Hiiraan.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 29-07-1438 Hijri.
Next: Qaraxyo Lala Beegsaday Saraakiil American Iyo Burundeys Ah.